Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeGuam Breaking » Iingcali eziphezulu zeswekile kunye nenkampani ye-AI eya eGuam
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeGuam Breaking • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Utyalo mali • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Iinkokheli zokhathalelo lwempilo zaseGuam zidibanisa imikhosi kunye nezobuchwephesha kwezobuchwephesha kwezeswekile ukwenza uphando oluqhutywa yiArtificial Intelligence oluqhutywa eGuam.
Uphononongo olucwangcisiweyo luza kugxila ekuhlanganiseni idatha yokhathalelo lwempilo kwimithombo eyahlukeneyo kunye nokufaka i-AI ekuchongeni iimeko ezinobungozi kunye nokubonelela ngolwazi kunyango lwezigulana ezinesifo seswekile.
Ezempilo ze-AI zijolise ekusebenziseni i-AI kunye ne-IoT ukubonelela ngezisombululo ezilula zokhathalelo lwempilo ezisebenza kwihlabathi lokwenyani namhlanje, ngendleko esebenzayo, ngendlela ehambelana nemfihlo.
Ukukhokela kolu phando kuya kuba zezinye zeengcali zonyango eziphambili kwisifo seswekile, ukhathalelo lwempilo kunye netekhnoloji- ngakumbi ejikeleze ubukrelekrele bokufakelwa kunye netekhnoloji enxibayo.
IZiko lezeMpilo laseGuam (i-GRMC), iZiko lonyango laseMelika (i-AMC), kunye ne-SelectCare kaCalvo babhengeze namhlanje ukuba bazimanye ne-AI yezeMpilo ukumilisela ubambiswano lophando ukuzisa ubukrelekrele bezinto ezingezizo (AI) zophando kwezonyango kwisiqithi saseGuam. Uphononongo olucwangcisiweyo luza kugxila ekuhlanganiseni idatha yokhathalelo lwempilo kwimithombo eyahlukeneyo kunye nokufaka i-AI ekuchongeni iimeko ezinobungozi kunye nokubonelela ngolwazi kunyango lwezigulana ezinesifo seswekile.
Ukukhokela kolu phando kuya kuba zezinye zeengcali zonyango eziphambili kwisifo seswekile, ukhathalelo lwempilo kunye netekhnoloji- ngakumbi ejikeleze ubukrelekrele bokufakelwa kunye netekhnoloji enxibayo. Inkqubo ye- Ezempilo ze-AI IBhodi yeNgcebiso ibandakanya uDavid C. Klonoff, MD (uvulindlela kwiTekhnoloji yeSwekile); noFrancisco J. Pasquel, MD (ingcali ekuphuculeni ukhathalelo ngeTekhnoloji yeSwekile).
Isifo seswekile siyaqhubeka ukuba yingxaki enkulu kwezempilo yoluntu echaphazela ngokungafaniyo abantu baseAsia, amaNazi aseHawaii, kunye nePacific Islander. Ngokwedatha yakutshanje evela kwi-CDC ukwanda kwesifo seswekile eGuam kuphezulu kunakwimimandla emininzi yase-US, kwaye kubantu abadala belifa lemveli laseChamorro yi-18.9% -kuphantse ukuba ibe nye kwabathandathu.
Guam yindawo efanelekileyo yokufunda isifo seswekile usebenzisa i-AI. "IGuam ibekwe ngokukodwa ukuba idale ifuthe elibonakalayo kufundo jikelele, kwaye okona kubaluleke kakhulu, isivumele ukuba sishiye ilifa elihle lokwenza ifuthe eluntwini kwabo banesifo seswekile," utshilo uGqirha Klonoff. “IGuam ayisiniki nje kuphela isampulu emele kakhulu kufundisiso lwethu, kodwa ikwasinika ukwahluka ngokobuhlanga, ubukho bezifo ezininzi ezinganyangekiyo, kunye noluntu olunqabileyo lwezonyango. Esi siqithi sincinci ngokwaneleyo ukuze sikwazi ukuqhuba isifundo esilawulwayo nesisebenza kakuhle, apho sikwazi ukubandakanya ngokuthe ngqo uninzi lwabachaphazelekayo kwinkqubo yezempilo. ”
Ngokusebenzisana nezibhedlele, ababoneleli ngeinshurensi, ababoneleli beenkonzo zokuqala, abaguli, kunye neelebhu Guam, inkampani yobugcisa Ezempilo ze-AI ijonge ukudibanisa ulwazi olubalulekileyo kuyo yonke le mithombo iye kwiqonga layo lobukrelekrele. Xa sele idityanisiwe, iqela liza kusebenzisa iindlela ezininzi ze-AI ukuhlalutya izigulana, ukuxela kwangaphambili ukuqhubela phambili kwesifo, kunye nokufumana amathuba awenzelwe ukungenelela kwangoko ukuphucula iziphumo zesigulana.
IZiko lezeMpilo laseGuam liya kusebenza njengeBhodi yoPhononongo lwaNgaphakathi yoFundo. "I-GRMC inemincili yokufaka isandla kolu bambiswano lunomdla kuphando esinethemba lokuba luza kuzisa ixesha elitsha ekukhathalelweni kwabantu abaphila nesifo seswekile, hayi eGuam kuphela kodwa kwihlabathi liphela," utshilo uGqirha oyiNtloko we-GRMC uGqirha. UAlexander Wielaard.